Albendazole (အယ်လ်ဘန်ဒဇော) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Albendazole ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Albendazole ကို တုတ်ပြားကောင် ရောဂါကူးစက်ခြင်း (ဥပမာ neurocysticercosis) ကို ကုသဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ Albendazole ဟာ သန်ချဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအသုံးဝင်ပုံ – Albendazole ကို ဆေးပညာ လမ်းညွှန်စာအုပ်များမှာ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများအတွက်လဲ အသုံးပြုခြင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို အခြားသန်ကောင် ရောဂါပိုးတွေကို ကုသဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Albendazole ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
ဒီဆေးကို သောက်ဆေးအဖြစ် အစာနဲ့ တစ်နေ့မှာ တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ် (သို့) ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် အတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သင် (သို့) သင့်ကလေးဟာ ဆေးမျိုရခက်တယ်ဆိုရင် ဝါးစားခြင်း (သို့) ချေခြင်းတွေပြုလုပ်ပြီး ရေနဲ့သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏဟာ ကိုယ်အလေးချိန်၊ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာ ဆေးကို နှစ်ပတ်လောက် ရပ်ဖို့လိုအပ်ပြီး ပြန်စဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးပြန်စဖို့အတွက် ပြက္ခဒိန်မှာ ရေးမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
Albendazole ကို အစွမ်းအထက်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ နေ့တိုင်းအချိန်မှန်မှန် သောက်သင့်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ညွှန်ကြားထားတဲ့ ပမာဏ ပြည့်သွားပြီဆိုရင်လည်း ရောဂါလက္ခဏာတွေ မရှိတော့ရင်တောင် ဆေးဆက်သောက်သင့်ပါတယ်။ ဆေးစောစော ရပ်လိုက်ခြင်းဟာ ရောဂါကူးစက်မှု ပိုမို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အခြားဆေးတွေ (corticosteroids ၊ အတက်ကျဆေး) တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်နိုင်ပါတယ်။
Grapefruit အသီး (သို့) ဖျော်ရည်သောက်ခြင်းကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှု မရှိမချင်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ Grapefruit ဟာ ဒီဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Albendazole ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Albendazole ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Albendazole ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Albendazole ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Albendazole ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Albendazole (သို့) Albendazole ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ၊ mebendazole၊ အခြားဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
အခြားဆေး၊ ဗီတာမင်၊ ဖြည့်စွက်စာ၊ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်ထုတ်ကုန်တွေ သောက်နေတာ ရှိရင်။ Theophylline သောက်နေရင် ပြောပြဖို့သတိရပါ။ သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိရင်၊ ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ စိတ်ကူးရှိရင်၊ ကလေးနို့တိုက်နေရင်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ မသေချာရင် ဒီဆေးကိုမသောက်သင့်ပါဘူး။ ဒီဆေးသောက်နေစဉ်လည်း ကိုယ်ဝန်မယူသင့်ပဲ ဆေးဖြတ်ပြီး တစ်လလောက်နေမှ ယူသင့်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ သန္ဓေသားဆေး အကြောင်းကို ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရသွားရင် ဆရာဝန်ကိုချက်ခြင်း အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု (သို့) သွားခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် (သို့) ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ဒီဆေး သောက်နေကြောင်း ပြောပြသင့်ပါတယ်။
Neurocysticercosis ကုသမှုအတွက် ဒီဆေးကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် ကုသနေစဉ်အတွင်းမှာ အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်မှု ကာကွယ်ပေးဖို့ အခြားဆေးတွေသောက်သင့်ကြောင်း ဆရာဝန်က ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ခြင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။ တက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အပြုအမူ ပြောင်းလဲခြင်း။
Albendazole က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ပြင်းထန် လက္ခဏာတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
အညိုအမဲစွဲလွယ်ခြင်း၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း
ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရေခွံလန်ခြင်း၊ အနီကွက်ထခြင်း
ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓါ နာကျင်ခြင်း၊ တုတ်ကွေး လက္ခဏာများ
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Albendazole နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Albendazole ဟာ သင် အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ အားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာ၀ ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆေးတွေသောက်နေတယ်ဆိုရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
• Cimetidine ၊ dexamethasone ၊ praziquantel
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Albendazole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Albendazole က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။ Grapefruit ကို ဆေးသောက်နေစဉ် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Albendazole နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Albendazole ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်သော Cysticercosis – ဝက်တုတ်ပြားကောင် တွေကို ကုသဖို့ ဒီဆေးသောက်နေတဲ့ လူနာတွေမှာ မျက်စိစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီဆေးသောက်ခြင်းဟာ မျက်လုံးအပါအဝင် အခြား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
• အသည်းရောဂါ – အသည်းရောဂါရှိသူတွေဟာ ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Albendazole ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
လူကြီး ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၆၀ ကီလိုဂရမ်အထက် ။ သောက်ဆေး 400 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ၂၈ ရက်သောက်ရန်။
လူကြီး ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၆၀ ကီလိုဂရမ်အောက် ။ သောက်ဆေး 15 mg/kg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ခွဲသောက်ရန်။
အများဆုံးပမာဏ ။ နေ့စဉ် သောက်ဆေး 800 mg
Cystic echinococcosis အတွက်
ကုသမှု စက်ဝန်း သုံးကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်တွင် ၂၈ ရက်ကုသပြီး ၊ စက်ဝန်းတစ်ခု နှင့် တစ်ခုကြားတွင် ၁၄ ရက် နားသည်။
Alveolar echinococcosis အတွက်
ကုသမှု စက်ဝန်းတစ်ကြိမ် တွင် ၂၈ ရက်ကုသပြီး စက်ဝန်းတစ်ခု နှင့် တစ်ခုကြားတွင် ၁၄ ရက် နားသည်။ ကပ်ပါးပိုးများ အရှင်းပျောက်ရန် ကုသမှုစက်ဝန်းကို လ မှ နှစ်တိုင်အောင်ပေးဖို့ လိုကောင်းလိုနိုင်သည်။
လူကြီး ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၆၀ ကီလိုဂရမ်အထက် ။ သောက်ဆေး 400 mg တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်။
လူကြီး ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၆၀ ကီလိုဂရမ် အောက်။ သောက်ဆေး 15 mg/kg နေ့စဉ် တစ်ရက်ကို နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ပြီး ၈ ရက် ကနေ ရက် ၃၀ အထိ သောက်ရန်။
လူကြီး ။ သောက်ဆေး 400 mg တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်
လူကြီး ။ သောက်ဆေး 400 mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
Hookworm infections အတွက်
လူကြီး ။ သောက်ဆေး 400 mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (သို့) တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ၃ ရက်ဆက်တိုက် ။ လိုအပ်ရင် ၃ ပတ်ကြာပြီးနောက် တစ်ခေါက်ပြန်သောက်နိုင်သည်။
လူကြီး ။ နေ့စဉ် သောက်ဆေး 400 mg တစ်ရက် တစ်ကြိမ် ၅ ရက်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Albendazole ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေး ။ ၂ နှစ်အထက် ။ 400 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ် ။
။ ၁-၂ နှစ် ။ သောက်ဆေး 200 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
ကလေး ။ ၂ နှစ်အထက် ။ သောက်ဆေး 400 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
။ ၁-၂ နှစ် ။ သောက်ဆေး 200 တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
ကလေး ။ သောက်ဆေး 400 mg နေ့စဉ် တစ်ရက်တစ်ကြိမ် ၅ ရက်။
Albendazole ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Albendazole ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား။ 200 mg ၊ 400 mg.
Albendazole ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Albendazole. https://www.drugs.com/mtm/albendazole.html. Accessed Aug 15, 2016.
Albendazole. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-6261/albendazole-oral/details. Accessed Aug
Albendazole (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/albendazole- oral-route/description/drg-20061505. Accessed Aug 15, 2016.